विवाहको प्रलोभनमा शोषण, सुत्केरी पारेर बिचल्ली | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
विवाहको प्रलोभनमा शोषण, सुत्केरी पारेर बिचल्ली
प्रकाशित मिति १४ आश्विन २०७५, आईतवार १२:०० लेखक नेपाली जनता
राजविराज । बाढीले भत्काएको घरमा आठ वर्षीय छोरा र दुई, चार र ६ वर्षीया छोरीबाहेक कोही छैनन् । काखमा अर्को तीनमहिने छोरो बोकेर हरेक दिन उर्मिला सदा न्याय खोज्दै टोल, समाज, संघ संस्था, न्यायिक समितिदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म पुगिरहेकी छिन् ।
छिमेकीबाटै यौन हिंसाको सिकार भएको भन्दै पीडकलाई कारबाही माग्दै उनले जताततै उजुरी पनि दिएकी छन् । तर सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–१ चहका टोलकी ३१ वर्षीया उर्मिला सदाले अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।
छोराछोरीको लालनपालन गर्न सम्पत्तिका नाममा केही नभएपछि त्यसको जोहो गर्ने आफूमाथि हिंसा गर्नेलाई कारबाही माग्दै चौतर्फी भौतारिने दोहोरो दिनचर्या छ, उनको ।
कतै सुनुवाइ नभएपछि साँझ निराश र थकित भएर घर फर्किन्छिन् । विगत एक वर्षदेखि यो उनको दिनचर्या नै बनेको छ । उर्मिलालाई न्याय दिलाउन शनिबार जनचेतना दलित संगम मधुपट्टी सप्तरीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सहयोगका लागि पहल गरिदिन सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा काखे बालकसहित उपस्थित भएकी पीडित महिला उर्मिलाको दुःख मार्मिक छ । छिमेकीबाटै यौन हिंसाको सिकार भएको बताएकी उनले न्यायका लागि स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि मानवअधिकारकर्मी र प्रहरीसम्म गुहार्दा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको सुनाइन् ।
हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी निकायमा उनले उजुरी दिइसकेकी छिन् । ‘तर मैले कुनै निकायबाट पनि न्याय पाइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यताबाट उता जानुस् भन्दै फर्काउँछन्, न्याय माग्न सबै निकायमा पुगिसकें, अब कता जाऊँ ?’
उर्मिलाका पति छैनन् । दुई वर्षअघि पति नारायणको मृत्यु भएपछि चार सन्तानको भरणपोषण उनका लागि ‘फलामको चिउरा’ भयो । पति वियोगपछि सन्तानको लालनपालनकै लागि उनले छिमेकी ३५ वर्षीय ओमप्रकाश यादवको घरमा काम गर्न सुरु गरिन् ।
घरमा भाँडावर्तन माझ्ने र खेतीपातीसम्मको काम गर्ने जिम्मेवारी पाइन् । एक दिन घरमा कोही नभएको मौका छोपी यादवले आफूसँग जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गरेको उर्मिलाको भनाइ छ ।
‘कसैलाई भन्यो भने तिमी र तिम्रो छोरा छोरीका लागि ठीक हुँदैन’ भनी धम्क्याउँदै ओमप्रकाशले पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गरेको उर्मिलाको आरोप छ ।
आफू गर्भवती भएपछि विवाह गर्ने प्रलोभन देखाउँदै यौन शोषण गरे पनि दलित भएकै कारण आफूलाई स्वीकार गर्न नमानेको उर्मिलाको भनाइ छ । गाउँमा बसेको पञ्चायतीमा ओमप्रकाशले गल्ती स्विकार्दै विवाह गर्ने कबोल गरे पनि पछि गएर बोली फेरेको उनले सुनाइन् ।
हाल पाँचौं सन्तानका रूपमा काखमा रहेका तीन महिनाका छोरा ओमप्रकाशकै शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेको उनले दाबी गरेकी छन् ।
उनले बच्चा जन्मिनुअघि न्यायका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा पनि पुगेको बताइन् । त्यतिबेला प्रहरीका एक जिम्मेवार अधिकारीले ‘पहिले बच्चा जन्माऊ अनि बच्चाको डीएनए जाँच गरेर आरोपीमाथि कारबाही गर्छु’ भनेर आश्वासन दिएको उर्मिला बताउँछिन् । ‘अहिले बच्चा जन्मिएपछि जाँदा पनि कहिले जिल्ला प्रहरी त कहिले अदालत जाऊ भन्छन्,’ उनी भन्छिन् ।
आफू र आफ्ना पाँच सन्तानलाई दुई छाक खुवाउन पनि धौधौ परिरहेको अवस्थामा न्यायका लागि कताकता र कसरी जाने आफूलाई केही थाहा नभएको उनी बताउँछिन् ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र श्रेष्ठले पीडित महिलाका तर्फबाट ढिलो गरी उजुरी आउँदा पनि मानवीय आधारमा गर्नुपर्ने प्रयासहरु गरिएको बताउँछन् । उनले आरोपी भनिएका ओमप्रकाशलाई पक्राउ गरी एक रात थुनामा राखिएको तर उनले आरोप अस्वीकार गरेपछि छाडेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन-धेरै षडयन्त्र हुँदैछ,जोगिएर हिँड्नू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसहित यो सरकारका मन्त्रीहरु विरुद्ध धेरै षडयन्त्रहरु भइरहेको भन्दै जोगिएर काम गर्न निर्देशन…
प्रदेशमा यस्तो छ दलहरूको अवस्था, सातै प्रदेशकाे नालीबेली !
प्रदेश १ : प्रदेश १ को जम्मा…
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैनामा रहेको सालझण्डी सामुदायिक वनमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सैनामैना…
विकासविज्ञको गलत सल्लाहमा फसे प्रधानमन्त्री, मेलम्चीमा नीतिगत भ्रष्टाचार
काठमाडौं । काठमाडौंका ५० लाख जनताको जीवनसँग गाँसिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ…
नेपालको कृषिमा कतारको चासो
काठमाडौं । कतारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चारदिने औपचारिक…
सरकारले २०२० सम्म बाघको संख्या दोब्बर पार्ने
काठमाडाैं । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढ्दै गएको छ ।
आहारा प्रजातिका जनावर पर्याप्त रुपमा पाउन थालेपछि निकुञ्जमा बाघको…
कोरोना उपचार कोषमा पूर्वराजाको २ करोड घोषणा
वैशाख ३ गतेसम्म आन्तरिक हवाई सेवा बन्द
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’
जो जहाँ छन् त्यही देशको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमतिः डा.राजन भट्टराई
आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले अनुरोध, बजेट जेठ १५ मै आउँछ
भ्रमण वर्षको केशरमहलस्थित सचिवालयसमेत १ वैशाख २०७७ बाट विघटन हुने
भारत नेपालको सिमानामा घर फिर्तीको माग गर्दै धर्ना. नाराजुलुस
अमेरिकी न्यूरोसर्जन डाक्टर जेम्स टी गूडरिचको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु
एकैदिन कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट स्पेनमा ९१३, अमेरिकामा ५ सय बढीको मृत्यु
राजनीतिक पदमा रहुञ्जेल पदको दुरुपयोग गरेर एक पैसा कमाउने काममा म लाग्दिन: ढकाल
मृत्‍युको सपना, मलामी, शँख र आर्यघाट !
कोरोनाभाइरस: महामारीको ‘उच्च अवस्था’सँग जुझ्न अमेरिका सक्षम रहेको ट्रम्पको दाबी
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 317 views
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका विषयमा कुरा उठेपछि प्रधामन्त्रीद्धारा हस्तक्षेप 46 views
कोरोनाभाइरस: विश्वव्यापी महामारीबाट कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु 38 views
मृत्‍युको सपना, मलामी, शँख र आर्यघाट ! 31 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 26 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 19 views
अमेरिकी न्यूरोसर्जन डाक्टर जेम्स टी गूडरिचको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु 11 views
यसरी गरिन्छ पोर्न फिल्मको शुटिङ 10 views